6da jees jees ee ugu wanaagsan mashaariicdaada naqshadeynta | Abuurista khadka tooska ah
6da jees jees ee ugu fiican
Isha Mockup: Pinterest
Ma rabtaa inaad muujiso boodhadh, boodhadh, banner ama, guud ahaan, mashruuc sawir ah oo aad samaysay? Way fiicantahay inaad u soo bandhigto macmiilka dukumiinti ay ku arki karaan sida ay u egtahay, laakiin ka waran hadaad isticmaasho ku jees jeesi si aad u siiso xaqiiqda dhabta ah ugana dhigto mid gebi ahaanba ka duwan?
Haddii aadan waligaa ka fiirsan inaad u muujiso naqshadahaaga qaab ka duwan sidii hore, adoo adeegsanaya jees jees ah hadana aad xiiseyneyso, waan ka hadli doonaa Waxaa loo isticmaali karaa in lagu baro qaabeynta qaab asli ah macaamiisha, laakiin sidoo kale in lagu muujiyo boggaga internetka, shabakadaha bulshada, iwm. oo raad weyn ku leh.
1 Waa maxay jees jees
2 Maxaad u isticmaashaa jees jees
3 Qaabdhismeedka qaab-dhismeedka qaabab la soo dejin karo
3.1 Qofka haya boodhadh
3.2 Sawir jees jees sawir ah
3.3 Sanduuq fudud
3.4 Jees jees
3.5 Sawir gacmeed
3.6 Bandhig farshaxan leh naqshadahaaga
Waa maxay jees jees
Xigasho: jees jees la'aan
Asal ahaan, jeesjees waa sawir qaade. Waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo horudhac naqshad si loo arko sida ay ugu muuqaneyso qaabab kala duwan. Tusaale ahaan, ka soo qaad in lagu weydiistay inaad naqshad sameyso weel. Waxa ugu caansan waa inaad sameyso mashruuc aad kuhelayso sawirka mugga, laakiin sidee buu macaamilku u arkaa?
Mar dambe uma baahnid inaad daabacatid weel tijaabo ah si aad u aragto sida uu u ekaan doono; Waxaad u adeegsan kartaa shaashadda muusiga mugga ah si aad u sameysid kulan macmal ah oo leh, sidaas darteed, u siiso qaab iyo naqshad, xitaa haddii ay khadka tooska ah tahay oo aan la taaban karin natiijada ugu dambeysa. Hadana haddii aad jeceshahay taas, markii koobka la sameeyo aad ayey u sii jeclaan doontaa.
Maxaad u isticmaashaa jees jees
Hadda oo aad ogtahay waxa jeesjeesku yahay, waxaa la joogaa xilligii aad wax yar ka baran lahayd sababta aad u adeegsanayso. Waxaan badiyaa ilaawnaa inaan siino naqshadaheena "xaqiiqo". Tusaale ahaan, aan soo qaadano arrinta boosta. Waad sameysay waadna u soo bandhigeysaa sidaad u soo bandhigi laheyd dabool, calan, iwm. Taasi waa, oo leh faylka jpg kaas oo wax waliba yahay daboolka. Laakiin macmiilka, ama qofka arkaaya, waa inuu fikrad ka helaa sida ay u egtahay nolosha dhabta ah, taas oo ah, rinjiyeynta, dusha, bogga internetka ...
Jeesjees ayaa dadka u oggolaanaysa inaysan u maleynin wax badan, maxaa yeelay waxa ay qabato ayaa ah shaqadaas aad soo qabatay oo ku dheji shax si ay u matalayso halka ay ahaan laheyd (iyo sida ay u ekaan laheyd). Waxaa jira kuwa fudud, oo aad ku leedahay asal midab leh oo sawirka la hor dhigay, iyadoo la siinayo xoogaa mug ah si ay ugu ekaato sawir dhab ah, ama ay jiraan kuwo aad loo sharaxay, oo u eg muuqaal muuqaal ahaan ka yimid nolosha dhabta ah ee qofka ka dhigta wuxuu fikrad fiican ka samayn karaa inay naqshad wanaagsan tahay iyo in kale.
Maxaase loo isticmaalaa jees jees? Waa hagaag, sababtaas darteed, maxaa yeelay waxaad ka caawisaa qofkaas inuu helo fikrad ah sida ay u ekaan doonto. Mararka qaarkood, markaan ku aragno mobilka ama kumbuyuutarka, ma garan karno sida natiijada ugu dambeysa ay noqon doonto. Laakiin agabkan waxaad ka caawin doontaa inaad si muuqata u aqbasho si ka sii fiican (ama xitaa aad u aragto cilladaha laga yaabo inay shaqadaadu ku dhacdo oo aad saxdo ka hor intaadan u dirin macmiilka).
Dabcan, sidoo kale waa hab lagu soo jiito dareenka dadka, oo ku habboon bogagga shabakadaha ama shabakadaha bulshada maxaa yeelay, halkii aad ku soo bandhigi lahayd nashqadahaaga qaab "caadi ah", waxaad ku ciyaareysaa xoogaa muuqaallo maalinle ah, ama naqshado ay ku jiraan laftiisa mashruucu inaad fulisay. Horeba gudaha tabta, ama dukumentiyo kale, waxaad ku dari kartaa sawirro muujinaya kaliya nashqadda, laakiin sawirka ka joojin kara inay joojiyaan wuxuu noqon karaa mid jees jees ah.
Marka laga hadlayo jees jeeska, kuwani waxay ku habboon yihiin daboolida buugga (marka aanad weli maskaxda ku hayn sida buuggu noqonayo), boodhadh, boorar, iwm. kuwaas oo u baahan in la muujiyo sida ay u kashifayaan.
Qaabdhismeedka qaab-dhismeedka qaabab la soo dejin karo
Xigasho: Mockup Free
Miyaynu horay u qaniinnay cayayaanka oo ma rabtaa iskuday inaad ku isticmaasho mashaariicdaada naqshadeynta? Waa hagaag, waad ogtahay in internetka ay jiraan arrimo badan oo bilaash ah oo lacag bixin ah oo aad isticmaali karto. Ama waxaad wakhti yar ku qaadan kartaa abuurista naftaada. Taasi waxay ku siin doontaa naqshadahaaga xitaa asal ahaan asal ahaan, gaar ahaan maadaama uusan qofna tusi doonin sida aad u sameyso.
Laakiin haddii aadan rabin inaad waqti lumiso oo aad u baahato wax dhaqso leh, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah tusaalooyin aad ka heli doontid jees jeeska iyo xulashooyinka kale.
Qofka haya boodhadh
Jees jeeskani wuxuu ku siinayaa taabashada aadamaha dad aad u badan qaabkaaga maxaa yeelay way ahaan doontaa sidii aad u daabacday shaqadaada isla markaana sawir la galay qof gacanta ku haysta. Waad heshay loo qeybin karo PSD waxayna leedahay sagaal nooc oo kaladuwan, markaa waad isticmaali kartaa midka aad doorbiday ama aad ugu jeceshahay.
Sawir jees jees sawir ah
Kuwa kale ikhtiyaar, kaas oo waliba ah midka maskaxda ku soo dhaca marka aan ka fikirno rinjiyeynta, waa in aan ku siino horudhac shaqadaada sidii oo ay tahay sawir ku dhegsan gidaar. Marka waxaad soo bandhigi kartaa bandhig shaqsiyeed iyo garaaf ah sida naqshadeyntaadu u ekaan doonto "nolosha dhabta ah", inkasta oo gebi ahaanba.
Xaaladdan, iyo bilaash, waxaad leedahay template-kan. Waxay muujineysaa a derbi siman iyo laba sawir oo sudhan, sida sawir, halkaas oo aad dhigatid naqshadahaaga. Hadda, in kasta oo ay u muuqato mid "aasaasi ah", haddaad u fiirsato, waxay leedahay hoosyo bixiya muuqaalka dhabta ah, taas oo iyaduna dhinaceeda ka dhigaysa mid aad u qurux badan.
Miyaa mashruucaaga lagu soo bandhigayaa wadada? Hagaag, ku muuji wadada. Halkan waxaad ikhtiyaar u leedahay sida ay u ekaanayso muuqaalka, oo sudhan gidaarka dhismaha, tusaale ahaan.
Laakiin sidoo kale waxaad ka fikiri kartaa inaad u sameyso hoyga baska, halkaasoo aan hadda wax badan ka aragno dadweynaha ama nooc kasta ha ahaadee marquee.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo jeesjeeska boodhadhka, kaas oo aad kula shaqeyso a template photorealistic. Xaaladdan oo kale, midkan aan kugula talineyno wuxuu leeyahay cabirro qaabab kala duwan iyo weliba xaglo kala duwan. Si aad ugu muujiso naqshadeyntaada qaabab asli ah, sida haddii aad u sameysay sawir qaadis.
Bandhig farshaxan leh naqshadahaaga
Oo maxaa dhacaya haddii aad ka dhigto inay u egtahay inaad runtii haysatay a bandhig faneed halkee naqshadahaagu ka yimaadeen? Hagaag, taasi waa waxa aan kuugu soo bandhigeyno shaxdan. Waa hab lagu helo fiiro gaar ah, gaar ahaan marka la arko sawirro macquul ah oo shaki kaa gelinaya.
Waad heli kartaa Halkan o aquí.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 6da jees jees ee ugu fiican
Waa maxay art art
Meesha laga soo dejinayo + 1000 qaabab oo loogu talagalay Photoshop